Xildhiban C/shakur C. Mire oo weerar ku qaaday Axmed Madoobe, kana hadlay Amarka uu kusoo rogay Kismaayo -News and information about Somalia
Home News Xildhiban C/shakur C. Mire oo weerar ku qaaday Axmed Madoobe, kana hadlay...
Xildhiban C/shakur C. Mire oo weerar ku qaaday Axmed Madoobe, kana hadlay Amarka uu kusoo rogay Kismaayo
Xildhibaan C/shakuur Cali Mire ayaa ku tilmaamay si xun u adeegsiga Federaalka iyo miraha laga dhaxlay Qaranjabkii Soomaaliya in guddoomiye Gobol uu isaga dhawaaqo inuu xiro qeyb ka mida xuduudaha dalka.
Xildhibaanka oo ka hadlayey warkii xalay kasoo baxay Maamulka Jubbaland ee lagu sheegay in la xiray xuduudaha Cirka, Dhulka iyo Badda ee magaalada Kismaayo inta ay ka dhaceyso doorashada madaxweynaha maamulka Jubbaland ayaa sheegay inaysan arrintaas oo kale ka dhicin dalalka xorta ah ee la aqoonsan yahay dhexdooda.
Wax inta badan aan ka dhicin dalalka xorta ah ee gobonimada la aqoonsan yahay leh, baa dalkeena ka dhaca. Guddoomiye gobol baa ku dhawaaqaya in hawada qeyb ka mid ah dalka iyo xuduudihisa Badba iyo Dhulku xiran yihiin. Waa miraha ka dhashay qaranjabka iyo si xun u adeegsiga fedralka.. ayuu qoraalkiisa ku yiri xidhibaan C/shakuur Cali Mire.
Xildhibankan ayaa ka mida taageerayaasha sida weyn ugu dhow madaxweyne Farmaajo, halka xildhibaanno kale oo ku sugan magaalada Kismaayo ay taageersan yihiin madaxweynaha doonaya in markii saddexaad la doorto ee Jubbaland Axmed Madoobe
Previous articleMaamulka Jubaland oo ku dhawaaqay in la xiray xuduudaha Dhulka, Badda & Cirka ee magaalada Kismaayo
Next articleDHAGEYSO: Doorashada Jubbaland Oo Looga Hadlay Kulankii Golaha Amaanka Qaramada Midoobeey